Wasaaradda cadaaladda oo Hooyo wiilkeedu ka xirnaa 4-sano ka caawisay in la soo daayo – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
By Diirshe / January 18, 2021 January 18, 2021
Muqdisho (SONNA)- Wasiirka Cadaaladda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya mudane Cabduqaadir Maxamed Nuur oo fulinaya ballan qaadkii uu u sameeyay Hooyo Luul Cismaan Xasan oo wiilkeedu muddo afar sanno ah ku xirnaa xabsiga dhexe ee dalka ayaa maanta ku guuleystay inuu u soo daayo, isagoo u maraya hab sharciga waafaqsan.
“Ilaahey SW ayaa mahad iska leh oo noo suura geliyey in aan maanta ku wareejino Maamo Luul Cusmaan wiilkeeda Xasan Cali. Waxay nagu qaadatey mudo labo maalin ah si loo soo dhameestiro habraacii lagu soo deyn lahaa oo sharci ah”Ayuu yiri Wasiir Cabdulqaadir.
Xasan Cali Ibraahim oo ah wiilka Hooyo Luul Cismaan ee maanta Wasiirka Cadaaladdu ku guuleystay sii deyntiisa ayaa horay uga mid ahaa ciidanka xoogga dalka, waxaana lagu helay inuu gatay qoraygii uu Qaranka ugu adeegayay, isagoo dhammeystay muddadii afarta sanno aheyd ee lagu xukumay.
Hooyo Luul Cismaan oo Wasiirka Cadaaladda Xukuumadda Soomaaliya habeen ka hor uu ku booqday gurigeeda, iyadoo murugeysan ayaa farxad la ooysay markii wiilkeeda loo soo daayay, waxayna Wasiir Cabduqaadir Maxamed Nuur uga mahadcelisay dadaalka uu ku bixiyay sii deynta wiilkeeda iyo sida uu uga jawaabay dareenkeeda.
Wasiirka Cadaaladda Soomaaliya mudane, Cabduqaadir Maxamed Nuur ayaa xusay in mas’uuliyad ay ka saarantahay u Adeegidda Ummadda Soomaaliyeed iyo sidii loogu cadaalad fali lahaa dhibanayaasha cadaalad doonka ah.